I-pulmonary embolism (PE) yenzeka xa i-embolus ngesiquphe ibhloka enye yemithambo yegazi emiphungeni. I-pulmonary embolism inokusongela ubomi. Yiya kutyelelo lwakho olulandelayo kwaye usebenzise abacoci gazi njengoko kuyalelwe. Oku kubaluleke ngakumbi ukuba ukhutshiwe kwisebe lezongxamiseko ukuba uye ekhaya.
IMIYALELO MALUNGA NOKUHLAWULWA KWESIBHEDLELE:
Tsalela umnxeba inombolo yakho yongxamiseko yasekuhlaleni (911 eMelika) ukuba:
Uziva unesiyezi, uphefumla kancinci, kwaye unentlungu esifubeni.
Biza ugqirha wakho ukuba:
Ingalo yakho okanye umlenze uziva ushushu, uthambile kwaye ubuhlungu. Ibingabona ukudumba nobomvu.
Inkqubo ye- ii-anticoagulants ukunceda ukuthintela amahlwili egazi. Amahlwili angabangela imivumbo, isifo sentliziyo, kunye nokufa. Ezi zilandelayo zikhokelo zokhuselo ngokubanzi ekufuneka zilandelwe ngelixa uthatha igazi elincinci:
Jonga ukopha kunye nokutyumza ngelixa uthatha abacoci gazi. Bukela nakuphi na ukuphuma kwegazi kwiintsini okanye empumlweni. Jonga igazi kumchamo wakho kunye nokuhamba kwamathumbu. Sebenzisa itawuli ethambileyo kulusu lwakho kunye nebrashi yamazinyo ethambileyo ukuhlamba amazinyo. Oku kunokuthintela ulusu lwakho okanye iintsini ekuphumeni kwegazi. Ukuba uchetyiwe, sebenzisa isitshetshe sombane. Sukudlala imidlalo yoqhakamshelwano.
Xelela ugqirha wakho wamazinyo kunye nabanye oogqirha ukuba uthatha igazi. Nxiba isacholo okanye isacholo somqala esithi uthatha eli yeza.
Sukuqala okanye ukuyeka naliphi na iyeza ngaphandle kokuba ugqirha ukuxelele. Amayeza amaninzi akanakusetyenziswa kunye nabacoci begazi.
Thatha igazi libe lincinci ngokuyalelwe ngugqirha. Musa ukweqa nayiphi na idosi okanye uthathe ngaphantsi kokuyalelwa. Xelela ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ulibale ukuthatha i-anticoagulant okanye ukuba uthatha ngaphezulu.
IWarfarin ligazi elincinanana elinjalo kuwe UCanzibe kufuneka uthathe. Kuya kufuneka wazi oku kulandelayo xa unokuthatha i-warfarin:
Olunye uhlobo lokutya kunye namayeza anokuchaphazela isixa se-warfarin egazini lakho. Sukwenzi utshintsho olukhulu kwindlela otya ngayo ngelixa uthatha i-warfarin. I-Warfarin isebenza ngcono ukuba utya malunga nexabiso elifanayo le-vitamin K yonke imihla. I-Vitamin K ifumaneka kwimifuno eluhlaza kunye nokunye ukutya. Buza ulwazi oluthe kratya malunga nokutya xa uthatha i-warfarin.
Uya kudinga ukuba undwendwele kunye nogqirha wakho xa uthatha i-warfarin. Uya kudinga uvavanyo lwegazi rhoqo. Olu vavanyo lusetyenziselwa ukumisela ukuba lingakanani iyeza olifunayo.
Thatha amayeza akho njengoko kuyalelwe. Jonga ugqirha wakho ukuba ucinga ukuba amayeza akho akakuncedisi okanye uneziphumo ebezingalindelekanga. Mxelele ukuba ngaba awunalo naliphi na iyeza. Gcina uluhlu oluhlaziyiweyo lwamayeza, iivithamini kunye nemveliso yamayeza owathathayo. Faka olu lwazi lulandelayo kumayeza: ubungakanani, ubukhulu, kunye nesizathu solawulo. Yiza noluhlu okanye iibhotile zeepilisi kunye nawe kwiindawo zakho zokulandelela. Zisa uluhlu lwamayeza kunye nawe kwimeko kaxakeka.
Gwema enye i-pulmonary embolism:
Guqula ukuma komzimba wakho okanye uhambe rhoqo. Ukuba uhamba ngemoto okanye usebenza edesikeni, hamba uze wolule isihlalo sakho amatyeli aliqela ngeyure. Kwinqwelomoya, phakama uhambe iyure nganye.
Zilolonge rhoqo ukonyusa ukuhamba kwegazi. Ukuhamba kukuzilolonga olunempembelelo entle. Thetha nogqirha wakho malunga nerejimeni efanelekileyo yokwenza umthambo.
Gcina ubunzima obusempilweni. Jonga ugqirha wakho ukuba ufanele ukulinganisa kangakanani. Mcele akuncede wenze isicwangciso sokulahleka kobunzima ukuba utyebile.
Musa ukutshaya. I-Nicotine kunye nezinye iikhemikhali ezikwi-cigarettes kunye ne-cigar zonakalisa imithambo yegazi kwaye zonyuse umngcipheko wokunye ukubola kwemiphunga. Buza ugqirha wakho ngolwazi ukuba ngaba uyatshaya ngoku kwaye ufuna uncedo ukuze uyeke. I-E-cigarettes okanye icuba elingenamsi lisenayo inicotine. Jonga ugqirha wakho ngaphambi kokusebenzisa ezi mveliso.
Buza malunga nolawulo lokuzalwa ukuba ungumfazi kwipilisi. Ipilisi yolawulo lokuzalwa yonyusa umngcipheko wamahlwili egazi kwabanye abantu basetyhini. Umngcipheko uphezulu ukuba nabo badala kunama-35, batshaya icuba, okanye banesifo sokunqanda igazi. Thetha nogqirha wakho ngezinye iindlela zokuthintela ukukhulelwa, njengentloko yesibeleko okanye isixhobo se-intrauterine (IUD).
Yiya kutyelelo lwakho olulandelayo kunye nogqirha okanye ingcali njengoko kuyalelwe:
Yenza idinga ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka. Kuya kufuneka uphinde ubuye rhoqo kuvavanyo lwegazi. Igazi lakho linokuvavanywa ukuze kubonwe ukuba lithatha ixesha elingakanani ukugquma. Ugqirha wakho okanye ingcali iya kukuxelela ukuba ufuna olu vavanyo kwaye uyenze kangaphi. Bhala phantsi imibuzo yakho ukuze ukhumbule ukuyibuza xa undwendwela.
kutheni ingono zam zibuhlungu
iziphumo ebezingalindelekanga zeepilisi ze-steroid
ukunciphisa amayeza kagqirha
I-topiramate ye-100 mg yokulahleka kobunzima
iyeza lokungaphumeleli kwentliziyo